Indlela entsha yeBhoho
Abameli abaninzi abanesibindi basetyhini ababuthathaka basebenzise isimbozo sikaBhoho, owazalwa ngokutsha nje nje, le nhlanganisela kwimifanekiso eqingqiweyo yezinto ezininzi ezingenangqondo. Kubalulekile ukuvisisana kwangaphakathi apho ingubo inokunika khona. I-Boho yindawo ethile, ikhululekile kwaye ikhululekile kumnini wayo.
Wabonakala ngo-2000, ngenxa yodumo olubizwa ngokuba yi Kate Kate, owathi wagqiba ukukhetha iingubo zakhe, ukhathele iziphakamiso zokwakha. Wagqoka ngokukhawuleza izinto ezingafanelekanga, kodwa ngendlela yakhe enomdla kwaye ngendlela yakhe yenze i-furore. UKate wayethanda isitayela esivulekile, waqala ukuqhubeka nokuvavanya, ukuvula iinkalo ezintsha zokudibanisa nokudibanisa ii-T-shirts kunye neebhotile ezinxibe ezimfutshane, iifutshane kunye nezambatho eziqhelekileyo. Ukhokho kaBhoho kwakuyindlela yokugqoka yaseMelika.
Igama lohlobo luvela kwigama elithi bohemian okanye i-bohemia, babehlala besetyenziswe kwinqanaba elidlulileyo, babonakalisa uluntu oluhle. Eli gama livela kwigama laseBohemia, elingelona lizwe, kodwa ummandla wase-Austria-Hungary, emva kweJamani, ngoko yiRiphabhlikhi yaseCzech. Kulo mmandla, ininzi iRom ihlala, eyona kuphela eyenza ihlabelele iingoma kwiitars, zixhamle. Abantu abanjalo abazange balithobele imithetho nemigangatho eyamkelekileyo. AmaFrentshi aqala ukubizwa ngokuthi "i-bohemian", iqokelelo lwabaculi, abaculi, abalobi, iibongozi, ngelixa bebonisa ukungabikho kwabo. Aba bantu babefuna ukuphila ubomi obungenasiphako. Kamva, uluntu lwabafundi bezobugcisa lwaqala ukubizwa ngokuba yi-bohemian, isitayela sikaBhoho siyaqhubeka nesithethe.
Ukugqoka ngokuhambelana nale ndlela, akuyimfuneko ukusebenzisa izinto ezityebileyo nezindleko. Kubalulekile ukufumana izinto eziqhelekileyo, kodwa ziyamnandi kwaye zintle ngaphandle komnye kwaye zidibanisa ngomfanekiso omnye. Mhlawumbi uyavuma ukuba iibhotshi zerabha zilungile kwiintsimbi ezinamandla, ukuba ziyimbala eqaqambileyo, ziya kuba zilungile kwimozulu embi, ziyakwazi ukuhamba kwisixeko. Ama-breeches esifutshane abukeka entle ekushiseni, kodwa ukuba uyabahlanganisa ngeebhuthi, uya kufumana isitayela seBhoho kwiingubo. Ukudibanisa kufuneka kube mnandi kwaye kunzima, kuba yonke imifanekiso ibalulekile.
Isitayela seBhoho sithetha uthakazo lwakho olunomdla kunye nomnqweno wobugcisa bokuyila, owenza oko. Unika amathuba amakhulu kunye neemfuno ezininzi. Unokuzibonisa ngokulula ukuba uyisithulu xa ungagqoki ngendlela yokubhala, udibanisa i-junk kuma-60 kunye nezixhobo ezisuka eGucci. Akusoloko kunokwenzeka ukudibanisa iindlela ezahlukeneyo zokugqoka kwimifanekiso enye. Kwimigangatho eyahlukeneyo yokwakheka kwesi siko, zaye zambethe iingubo ezininzi ezenziwe ngeempahla zendalo. Iidonki kunye neengubo, ezihlotshiswe ngogqabi, iingubo ezinde kunye nama-frills, ijee ezigugile.
Imigaqo yendlela yokugqoka
Izinto eziphathekayo kufuneka zibe yendalo, kwaye ubomvu lungcono ukusebenzisa i-synthetic. Ngokuqhelekileyo, abalandeli besitayela seBoho baqaphela uthando lwendalo.
Ukulula nokukhanya. Izinto ezinqabileyo kakhulu azifanelanga. Kodwa izinto ezincinci, zemihla ngemihla nezilula zilungele kuwe.
Ukuphucula nokulula. Isizathu sokubonakala kwesitayela seBhoho sikulungele, kufuneka ulandele le ndlela, kodwa ungaziqhubi kwiingubo ezingenakunqwenelekayo, kodwa wenze ubomi buhle kwaye bube lula.
Le ndlela ifanelekile kulabo abafuna ukuzakhela iimpahla zokugqoka. Ungasebenzisa iimpahla ezingadingekile kwikhementi uze ungeze kuye izipho zomntu okanye ukuthenga okungagqibekanga kwithengiso, njengesikhwama esivela kuLouis Vuitton esingafanelanga nayiphi na ingubo yakho.
Kuphi ukujonga izinto zeBhoho?
Kwizaziso zesandla sesibini unokufumana into yokuvuna. Kwi-mezzanines, apho izinto zikagogo kunye nomama zigcinwa khona, unokufumana ubuncwane bokwenene. Umshini wokuthunga, i-hook iya kuza kukuhlangula. Kwiimarike ezithengayo unokufumana iingubo zokuvunwa kweemali, iziqhosha zokuhlobisa, i-brace and antique lace.
Akuncinci ukuba, kuba izinto ezivela kwindwangu zendalo zibiza amaxesha amaninzi ngaphezu kwezinto ezenziwe ngeempahla zokufakelwa. Ukuqonda le mveliso, kufuneka ulandele imigaqo:
Esi sambatho, izinto ezixabisa kakhulu kufuneka zibe ziigcobo, izicathulo, iingxowa.
Yenza ngempumelelo umxube wesitayela, kwaye ungabonakali ngokukodwa izinto zobumba.
Khetha into egcizelela isidima sakho.
Nika ingqalelo kwiinkcukacha, zenza umfanekiso uphelele.
Okwangoku, isitayela seBhoho sibonakalisa abantu abenza isikhundla esisebenzayo malunga nehlabathi elibangqongileyo. Lawa malungelo olwela amalungelo ezilwanyana, abameli bemvelo, abagadi bemifuno. Aba bantu baxabisa abantu babo, ukuzithetha, inkululeko. Aba bantu baphila ngokuvisisana nehlabathi kwaye baqonda ngokucacileyo indawo yabo kuyo.
Isibambiso somfazi emva kwama-40
Isitayela saseClastic kwiingubo
Indlela yokusela itiye eluhlaza ukuze unciphise ubunzima: Ngaphandle kwezi zifihli ezi-5 akukho nto iya kuvela
I-Salmon ngesiShayina i-sauce ibhaka ehovini
Ukwenza iintlobo ezahlukeneyo zobuso: umyalelo olula kwinqanaba
Amanqatha e-Badger: izibonakaliso zokusetyenziswa
Cookies yase-Austrian Linzer
Ilayisi ngesibindi kwi-multivark
Iingcebiso ezincinci kubafazi
I-cheese fondue negalikhi kunye newayini